दशैंमा मंगोलले सेतो टिका र आर्यले रातो टीका किन लगाउँछन् | Yangwarak Focus
Home देश दशैंमा मंगोलले सेतो टिका र आर्यले रातो टीका किन लगाउँछन्
दशैंमा मंगोलले सेतो टिका र आर्यले रातो टीका किन लगाउँछन्
१० कार्तिक २०७७, सोमबार ०८:४०
कार्तिक १०, याङ्वरकफोकस / दशैंमा लगाइने टीका फरक फरक हुन्छ। अहिले पनि खसआर्यले रातो टीका निधारभरी लगाउँछन् भने मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, तामाङ, नेवारलगायत जनजातिले सेतो टीका लगाउँछन्। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति संस्कृतिविद् डा जगमान गुरुङ भने अहिले आएर रातो र सेतो भनेर विवाद गर्नु बेकारको विषय भएको बताउँछन्।
पहिलेपहिले सबैले दही र चामल मुछेर सेतै टीका लगाउने चलन रहेको डा. गुरुङको भनाइ छ। ‘पहिले कहाँ पाउनु अबीर, उत्पाद नै हुँदैनथ्यो। सबैले सेतै टीका लगाउने हो,’ डा. गुरुङले डिसी नेपालसँग भने, ‘रातो टीका लगाउन थालिसकेका जनजाति पनि आफ्नो पहिचान भन्दै सेतोमै फर्केका छन्। वास्तवमा, जनजाति मात्र होइन, खसआर्यले लगाउने भनेको पनि सेतै टीका हो।’
पछि बजार र यातायातको सुविधा भएपछि अबीरको प्रयोग हुन थालेको उनको भनाइ छ। पहिले नेवारले मात्रै रातो टीका लगाउने उनको भनाइ छ। अबिर बेच्ने ब्यापारी नेवारले मात्र रातो टीका लगाउने गरेको गुरुङ बताउँछन्।
अहिले आएर दशैंको टीकासम्बन्धी अपव्याख्या भएको गुरुङले बताए। रातो हाम्रो होइन, हाम्रो टीका त सेतो हो भन्नु जनजातिले गरेको अपव्याख्या भएको उनको तर्क छ। गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, तामाङहरुले हाम्रो रातो होइन भन्नुभन्दा पहिले आफ्नो चलन हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
अक्षतामा मुछिने अबीर नेपालको आफ्नो उत्पादन नभएकाले रातो टीका यहाँको मौलिक परम्परा हुनै नसक्ने उनको तर्क छ। बाहुन क्षेत्रीले पनि रातो टीका लगाउन थालेको धेरै वर्ष नभएको गुरुङले बताए। बिस्तारै बजारको पहुँच र भारतीयको प्रभावले विजयको प्रतीकको रुपमा रातो सबैले रातो टीका लगाउने प्रचलन बढेको गुरुङको भनाइ छ। दशैं कुनै जात विशेषको पर्व नभएर सबै जातको सांस्कृतिक पर्व भएको उनको भनाइ छ।
गुरुङ दशैंलाई ‘लडाइँसँग जोडिएको संस्कृति’ मान्छन्। जसले रगतमा मुछेको टीका लगाउँछ उसैले रातो त हाम्रो होइन भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ।
बली दिँदा थानको ढुंगामा पर्सिने चलन छ,’ गुरुङले भने, ‘बली दिएको टाउकोको रगत थाल वा टपरीमा राखेको अक्षतामा मुछेर टीका लगाउने हो।’ यो चलन नेवारहरुले सुरु गरेका हुन्।
बाहुन त काटमार नै नगर्ने जात भएको गुरुङको भनाइ छ। ‘बाहुन काटमार गर्ने जातै होइन। क्षेत्री, गुरुङ, मगर, राई, लिम्बूहरु लडाकु जाति हुन्। उनीहरुले दुश्मनको छातीमा घुँडाले टेकेर, कम्मरको कर्दले काटेर रगतको टीका लगाउने जात हो,’ डा. गुरुङले भने। त्यसैले उनीहरुले रातो टीका हाम्रो होइन भन्नु भनेको संस्कृतिको अपव्याख्या भएको गुरुङको निश्कर्ष छ।
किन लगाइन्छ त दशैंमा टीका?
टीकाकोे महत्व समृद्धि, शक्ति र युद्धसँग जोडिएको संस्कृतिविद् डाक्टर जगमान गुरुङ बताउँछन्। ‘क्षत भनेको नाश हो, अक्षत भनेको नाश नहुने, यही नाश नहुने अन्नका रूपमा चामललाई अक्षता भनेर टीका लगाउन थालिएको हो।’
अक्षता धानको चामलको हुन्छ। संस्कृतमा धन्य र नेपाली भनिने धान अन्नमध्येको उच्चकोटीको अन्नको रुपमा मानिने गुरुङको भनाइ छ। चामलको भात भोजन गर्नुभन्दा पहिले निधारमा लगाउने चलन सुरु भएको गुरुङको तर्क छ। दशैँ खेतबारीको कामबाट विश्राम लिएर किसानहरुले हातहतियार सफाइ गर्ने र धार लगाएर राख्ने चलन छ। अझै पनि नवरात्रीमा हातहतियार पूजा गर्ने चलन छ।
‘खेतबारीबाट काम मुक्त भएर हातहतियार सफा गर्ने, साँध लगाउने, पूजा गरेर दशमीको दिन हातहतियार अभिषेक गरेपछि निधारमा दहीमा मुछेको चामलको टीका लगाए हर्षबढाइँ गर्दै युद्धको अभ्यासमा निक्लने चलन थियो,’ डा. गुरुङ भन्छन्, ‘दशैं युद्ध परम्परासँग जोडिएको पर्व हो।’ दशैंमा पुजिने दुर्गा एक शक्तिको प्रतीक भएको गुरुङ बताउँछन्। ( डिसिनेपालमा प्रकाशित समाचार )
Previous articleआज विजयादशमी : मान्यजनको हातबाट टीकाग्रहण गरिँदै, टीकाको उत्तम साइत बिहान १० बजेर १९ मिनेटमा
Next articleखुलामञ्चमा टिका
खुलामञ्चमा टिका | Yangwarak Focus October 26, 2020 At 2:49 pm
सुमन सहयात्री - १० कार्तिक २०७७, सोमबार ०८:४०